‘Yehowa Da Kɛse No Abɛn’
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | December 15, 2006
“[Yehowa, NW] da kɛse no abɛn, abɛn na ɛreba ntɛm sɛ.”—SEFANIA 1:14.
1, 2. (a) Da titiriw bɛn na Kristofo rehwɛ kwan? (b) Nsɛm bɛn na ɛho hia sɛ yebisa, na dɛn ntia?
ABABAA bi a n’ani agye de ahopere rehwɛ n’ayeforohyia da kwan. Ɔbea a ɔyem de anigye rehwɛ da a ɔbɛwo no kwan. Odwumayɛni bi a wabrɛ rehwɛ da a ɔde bɛkɔ akogye n’ahome no kwan denneennen. Dɛn na yehu wɔ nnipa baasa yi nyinaa ho? Wɔn nyinaa retwɛn da titiriw bi—da bi a ɛde nsakrae bɛba wɔn asetra mu. Wɔn nyinaa wɔ anigye mu, nanso ɛsono nea ama wɔn mu biara ani agye no koraa. Sɛ ɛdan sɛ ɔbo a, saa da no bɛba, na wɔwɔ anidaso sɛ ɛbɛba no na wɔasiesie wɔn ho.
2 Saa ara na ɛnnɛ nokware Kristofo nso de ahopere rehwɛ da titiriw bi kwan. Ɛyɛ ‘Yehowa da’ kɛse no. (Yesaia 13:9; Yoel 2:1; 2 Petro 3:12) Dɛn ne ‘Yehowa da’ a ɛreba yi, na sɛ ɛba a, ɛbɛka adesamma dɛn? Bio nso, yɛbɛyɛ dɛn ahu sɛ yɛasiesie yɛn ho ama saa da no? Ehia sɛ yɛhwehwɛ nsɛmmisa yi ho mmuae seesei, efisɛ adanse a ɛwɔ hɔ ma yehu nokwasɛm a Bible mu asɛm yi yɛ: “[Yehowa, NW] da kɛse no abɛn, abɛn na ɛreba ntɛm sɛ.”—Sefania 1:14.
‘Yehowa Da Kɛse No’
3. Dɛn ne ‘Yehowa da kɛse no’?
3 Dɛn ne ‘Yehowa da kɛse no’? Baabi a asɛm ‘Yehowa da no’ pue wɔ Kyerɛwnsɛm mu biara no, ɛkyerɛ bere titiriw a Yehowa de atemmu baa n’atamfo so na ɔhyɛɛ ne din kɛse no anuonyam. ‘Yehowa nna’ bɛtoo nnipa a na wɔwɔ Yuda ne Yerusalem a wɔanni Onyankopɔn nokware ne Babilonfo ne Misrifo asisifo no nyinaa bere a Yehowa de atemmu baa wɔn so no. (Yesaia 2:1, 10-12; 13:1-6; Yeremia 46:7-10) Nanso ‘Yehowa da’ kɛse a ɛsen biara da so ara wɔ yɛn anim. Ɛyɛ “da” a Yehowa de atemmu bɛba wɔn a wogu ne din ho fĩ no so. Wobedi kan asɛe “Babilon Kɛse,” wiase atoro som ahemman no, na awiei koraa no, wɔasɛe wiase bɔne yi wɔ Harmagedon ko no mu.—Adiyisɛm 16:14, 16; 17:5, 15-17; 19:11-21.
4. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ nnipa dodow no ara suro Yehowa da a ɛreba ntɛmntɛm no?
4 Sɛ́ nnipa dodow no ara nim anaa wonnim no, ɛsɛ sɛ wosuro saa da yi a ɛreba ntɛmntɛm no. Dɛn ntia? Yehowa nam odiyifo Sefania so bua sɛ: “Ɛda no yɛ anibere da, ahohia ne ahokyere da, ɔsɛe ne amamfõyɛ da, esum ne kusuuyɛ da, amununkum ne kusukuukuu da.” Ɛyɛ hu ankasa! Bio nso, odiyifo no ka sɛ: “Mehiahia nnipa ho . . . efisɛ [Yehowa, NW] na wɔayɛ no bɔne.”—Sefania 1:15, 17.
5. Dɛn nti na nnipa ɔpepem pii rehwɛ Yehowa da no kwan denneennen?
5 Nnipa ɔpepem pii rehwɛ Yehowa da no kwan denneennen. Dɛn ntia? Wonim sɛ ɛyɛ bere a wɔde begye atreneefo nkwa, na ɛyɛ da a Yehowa ankasa de bɛhyɛ ne ho anuonyam na watew ne din kronkron no ho. (Yoel 3:16, 17; Sefania 3:12-17) Sɛ́ nnipa besuro saa da no anaasɛ wɔbɛhwɛ kwan denneennen no gyina sɛnea wɔrebɔ wɔn bra seesei no so kɛse. Wubu saa da a ɛreba no dɛn? Woasiesie wo ho? So nokwasɛm a ɛyɛ sɛ Yehowa da no abɛn no ka sɛnea wobɔ wo bra seesei no?
‘Fɛwdifo Bɛba Abedi Fɛw’
6. Nnipa dodow no ara bu ‘Yehowa da’ no dɛn, na dɛn nti na eyi nyɛ nokware Kristofo nwonwa?
6 Ɛmfa ho sɛ nneɛma gye ntɛmpɛ no, ‘Yehowa da’ a ɛreba no ho asɛm nhia wiase yi mu nnipa dodow no ara. Wodi nkurɔfo a wɔbɔ wɔn kɔkɔ wɔ da no ho no ho fɛw na wɔserew wɔn. Eyi nyɛ nokware Kristofo nwonwa. Wɔkae kɔkɔbɔ a ɔsomafo Petro kyerɛwee yi: “Nea edi kan koraa no, munim sɛ nna a edi akyiri no mu no fɛwdifo bedi wɔn ankasa akɔnnɔ akyi abedi fɛw aka sɛ: ‘Ne mmae a wɔahyɛ ho bɔ no wɔ he? Hwɛ, efi da a yɛn agyanom dedae no, biribiara te sɛ nea na ɛte fi abɔde mfiase.’”—2 Petro 3:3, 4.
7. Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛakɔ so ama yɛn ani ada hɔ?
7 Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛako atia adwene a ɛnteɛ yi, na yɛakɔ so ama yɛn ani ada hɔ? Petro ka kyerɛ yɛn sɛ: “Merekaakae mo de akanyan mo adwene ma emu ada hɔ fann na moakae nsɛm a adiyifo kronkron no aka ato hɔ no ne ahyɛde a Awurade ne Agyenkwa no nam mo asomafo so de mae no.” (2 Petro 3:1, 2) Sɛ yetie nkɔmhyɛ a wɔde rebɔ yɛn kɔkɔ yi a, ɛbɛboa ma ‘yɛakanyan yɛn adwene ma emu ada hɔ fann.’ Ebia yɛate nsɛm yi mpɛn pii, nanso nnɛ, ɛho hia sɛ yɛkɔ so tie kɔkɔbɔ yi sen bere biara.—Yesaia 34:1-4; Luka 21:34-36.
8. Dɛn nti na nnipa pii ntie kɔkɔbɔ a ɛwɔ Bible mu no?
8 Dɛn nti na ebinom ntie kɔkɔbɔ yi? Petro toa so sɛ: “Esiane sɛ wɔn ankasa pɛ no saa nti, wonhu nokwasɛm yi sɛ efi tete no na ɔsoro wɔ hɔ, na asase no fi nsu mu gyina hɔ pintinn ma nsu atwa ho ahyia, Onyankopɔn asɛm nti; na ɛnam so na nsu yiri sɛee wiase a na ɛwɔ hɔ saa bere no.” (2 Petro 3:5, 6) Nokwarem no, ebinom yam a anka Yehowa da no remma. Wɔmpɛ sɛ biribiara betwitware wɔn akwan mu. Wɔmpɛ sɛ wobebu wɔn brabɔne no ho akontaa akyerɛ Yehowa! Sɛnea Petro kae no, ‘wodi wɔn ankasa akɔnnɔ akyi.’
9. Su bɛn na nnipa daa no adi wɔ Noa ne Lot nna no mu?
9 Esiane nea fɛwdifo yi ‘ankasa pɛ’ nti, wɔmpɛ sɛ wogye tom sɛ tete no Yehowa de ne ho gyee adesamma nsɛm mu. Yesu Kristo ne ɔsomafo Petro nyinaa kaa nsɛm abien a ɛte saa a esisii, “Noa nna” ne “Lot nna” no ho asɛm. (Luka 17:26-30; 2 Petro 2:5-9) Ansa na Nsuyiri no reba no, nnipa antie kɔkɔbɔ a Noa de mae no. Saa ara nso na Lot ‘yɛe sɛ obi a ɔredi fɛw’ wɔ ne nsenom ani so ansa na wɔresɛe Sodom ne Gomora.—Genesis 19:14.
10. Dɛn na Yehowa bɛyɛ wɔn a wontie kɔkɔbɔ no?
10 Saa ara na ɛte ɛnnɛ. Nanso, hwɛ nea Yehowa bɛyɛ wɔn a wontie kɔkɔbɔ no: ‘Mɛtwe nnipa a wɔada wɔn puw so no asõ, wɔn a wose wɔn komam sɛ: Yehowa renyɛ papa na ɔrenyɛ bɔne no. Na wɔn ahonyade bɛdan afow ade, na wɔn afi adeda ntuw; wobesisi adan, na wɔrentra mu, na wɔbɛyɛ bobe nturo, na wɔrennom mu nsã.’ (Sefania 1:12, 13) Ebia nkurɔfo bɛkɔ so ayɛ nneɛma a wɔyɛ no daa no, nanso wɔrennya wɔn adwumaden no so mfaso nkosi ase. Dɛn ntia? Efisɛ Yehowa da no bɛba mpofirim, na ahonyade biara a ebia wɔaboaboa ano no rennye wɔn.—Sefania 1:18.
“Twɛn no Ara”
11. Afotu bɛn na ɛsɛ sɛ yɛma ɛtra yɛn adwene mu?
11 Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade te sɛ nnipa abɔnefo a wɔatwa yɛn ho ahyia no, na mmom ɛsɛ sɛ yɛma odiyifo Habakuk afotu yi tra yɛn adwenem: “Adehu no da so kyerɛ bere a wɔahyɛ, na ɛpere repɛ awiei, na ɛrenni atoro; sɛ ɛtwentwɛn ase nso a, twɛn no ara, na ɔba de, ɛbɛba, ɛrenka akyiri.” (Habakuk 2:3) Sɛ́ nnipa a yɛnyɛ pɛ no, sɛ da no yɛ te sɛ nea ɛrekyɛ wɔ yɛn ani so mpo a, ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ Yehowa nkyɛ ne bɔhyɛ ho. Ne da no bɛba bere a wɔahyɛ no pɛpɛɛpɛ, wɔ dɔn a nnipa nhwɛ kwan mu.—Marko 13:33; 2 Petro 3:9, 10.
12. Dɛn na Yesu bɔɔ ho kɔkɔ, na ɔkwan bɛn so na eyi yɛ soronko wɔ Yesu akyidifo anokwafo no nneyɛe ho?
12 Bere a Yesu resi hia a ehia sɛ yɛtwɛn Yehowa da no so dua no, ɔbɔɔ kɔkɔ sɛ n’akyidifo binom mpo remma wɔn ani nna hɔ yiye. Ɔkaa wɔn ho asɛm siei sɛ: “Sɛ akoa bɔne no ka no ne komam sɛ, ‘Me wura rekyɛ,’ na sɛ ofi ase hwe ne mfɛfo nkoa no na ɔne akɔwensafo didi nom a, saa akoa no wura bɛba da a ɔnhwɛ kwan ne dɔn a onnim, na ɔbɛtwe n’asõ denneennen.” (Mateo 24:48-51) Nanso akoa nokwafo ne ɔbadwemma kuw no de, wofi nokwaredi mu ma wɔn ani da hɔ yiye. Akoa kuw no akɔ so awɛn na wasiesie ne ho. Yesu de no ‘asi nea ɔwɔ nyinaa so’ wɔ asase so.—Mateo 24:42-47.
Ehia sɛ Yɛyɛ Ade Ntɛm So
13. Yesu sii hia a na ehia sɛ Kristofo no yɛ wɔn ade ntɛm so no so dua dɛn?
13 Ná ɛho hia sɛ afeha a edi kan mu Kristofo no yɛ wɔn ade ntɛm so. Ná ɛsɛ sɛ woguan fi Yerusalem ntɛm ara bere a wohui sɛ “asraafo dɔm atwa . . . ho ahyia” no. (Luka 21:20, 21) Ɛno sii wɔ afe 66 Y.B. mu. Hyɛ sɛnea Yesu sii hia a na ehia sɛ Kristofo yɛ wɔn ade ntɛm saa bere no so dua no nsow: “Mma nea ɔwɔ ɔdan atifi no nnsi mmma mmmɛfa biribi wɔ ne fie, na mma nea ɔwɔ afuw mu no nnsan mmma fie mmmɛfa n’atade nguguso.” (Mateo 24:17, 18) Esiane sɛ abakɔsɛm ma yehu sɛ mfe anan akyi ansa na wɔresɛe Yerusalem nti, dɛn nti na na ɛho hia paa sɛ Kristofo no tie Yesu kɔkɔbɔ no wɔ afe 66 Y.B.?
14, 15. Dɛn nti na na ɛnsɛ sɛ afeha a edi kan mu Kristofo no twentwɛn wɔn nan ase bere a wohui sɛ asraafo dɔm abetwa Yerusalem ho ahyia no?
14 Ɛwom sɛ ɛyɛ nokware sɛ Roma asraafo no ansɛe Yerusalem kosii afe 70 Y.B. de, nanso saa mfe anan no anyɛ asomdwoe bere koraa. Awudisɛm ne mogyahwiegu hyɛɛ saa bere no ma. Abakɔsɛm kyerɛwfo bi ka tebea a na ɛwɔ Yerusalem saa bere no ho asɛm sɛ, “wohwiee nnipa pii mogya gui wɔ ɔmanko mu, na wodii atirimmɔdensɛm a ani yɛ nyane.” Wɔfaa mmerante a wɔbɛbɔ kurow no ho ban, wobekura akode, na wɔakɔ sraadi. Da biara na wɔma wɔn asraafo ntetee. Wobuu wɔn a na wɔn ani nnye mmara denneennen a wɔahyehyɛ no ho sɛ afatwafo. Sɛ Kristofo no twentwɛnee wɔn nan ase wɔ kurow no mu a, anka wɔn ho bɛka mu papaapa.—Mateo 26:52; Marko 12:17.
15 Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ Yesu anka sɛ wɔn a wɔwɔ Yerusalem no nkutoo na womfi ase nguan, ná “wɔn a wɔwɔ Yudea” no nso ka ho. Ná eyi ho hia efisɛ asram kakra bi akyi a Roma asraafo no fii Yerusalem kɔe no, wɔsan fii wɔn akodi no ase. Nea edi kan no, wodii Galilea so nkonim wɔ afe 67 Y.B., na afe a edi hɔ no, wodii Yudea so nkonim. Eyi maa wɔn a wɔtete nkuraase no kɔɔ ahokyere kɛse mu. Ɛyɛɛ den paa nso maa Yudani biara a na ɔwɔ Yerusalem no sɛ obeguan afi hɔ. Ná awɛmfo wɛn kurow apon no, na wobuu obiara a ɔbɔɔ mmɔden sɛ obeguan no sɛ ɔwɔ Romafo no afã.
16. Dɛn na na ehia sɛ afeha a edi kan mu Kristofo no yɛ na ama wɔanya nkwa wɔ saa ahohia bere no mu?
16 Bere a nsɛm yi nyinaa wɔ yɛn adwene mu no, yebetumi ahu nea enti a Yesu sii sɛnea na nneɛma gye ntɛmpɛ saa bere no so dua no. Ná ɛsɛ sɛ Kristofo fi wɔn pɛ mu de nneɛma bɔ afɔre, na na ɛnsɛ sɛ wɔma ahonyade twetwe wɔn adwene. Ná ɛsɛ sɛ wonya ɔpɛ sɛ ‘wobegyaw wɔn ahode nyinaa hɔ’ na ama wɔatumi atie Yesu kɔkɔbɔ no. (Luka 14:33) Wɔn a wotiee kɔkɔbɔ no ntɛm na woguan kɔɔ Yordan agya no nyaa nkwa.
17. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ yiye?
17 Bible mu nkɔmhyɛ ma yehu sɛ yɛabɛn awiei bere no paa. Enti, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ yiye sen bere biara. Sɛ asomdwoe wɔ hɔ a, ɔsraani nte ɔko mu ahoyeraw ne asiane nka. Nanso sɛ wansiesie ne ho bere nyinaa na wanhu hia a ehia sɛ ɔma n’ani da hɔ na wɔfrɛ no prɛko pɛ sɛ ɔnkɔ ko a, anhwɛ a asɛm bɛfa n’ase. Saa ara na ɛte wɔ yɛn fam sɛ Kristofo. Sɛ yɛamma yɛn ani anna hɔ a, yɛrentumi nsiesie yɛn ho nko ntia ɔhaw a ɛba yɛn so no, na anhwɛ a Yehowa da no bɛba abɛto yɛn mpofirim. (Luka 21:36; 1 Tesalonikafo 5:4) Sɛ ebinom ‘afi Yehowa akyi’ a, ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ wɔsan hwehwɛ no.—Sefania 1:3-6; 2 Tesalonikafo 1:8, 9.
18, 19. Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛama “Yehowa da no ba” ayɛ ntɛm yɛn adwenem?
18 Ɛnyɛ nwonwa sɛ ɔsomafo Petro tu yɛn fo sɛ yɛmma “Yehowa da no ba” nyɛ ntɛm wɔ yɛn adwenem! Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ eyi? Ɔkwan biako ne sɛ yɛde yɛn ho bɛhyɛ “abrabɔ kronkron ne nyamesom pa mu” denneennen. (2 Petro 3:11, 12) Yɛn ho a yɛde bɛhyɛ nnwuma a ɛte saa mu no bɛboa yɛn ma yɛde ahopere ahwɛ “Yehowa da no” kwan. Nea Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “yɛ ntɛm mo adwenem” no kyerɛ ankasa ne sɛ “yɛbɛyɛ biribi ntɛmntɛm.” Yɛrentumi mma bere a aka a Yehowa da no bɛba no mma ntɛmntɛm ankasa. Nanso bere a yɛretwɛn saa da no, sɛ yɛyɛ Onyankopɔn som adwuma no denneennen a, bere no bɛkɔ ntɛmntɛm asen sɛnea yɛhwɛ kwan no.—1 Korintofo 15:58.
19 Saa ara na sɛ yedwennwen Onyankopɔn Asɛm ne emu nkaesɛm ho a, ɛbɛboa yɛn ma yɛayɛ eyi—“yɛbɛhwɛ kwan denneennen” sɛ saa da no bɛba, nokwarem no, “yɛbɛtwɛn bere nyinaa.” (2 Petro 3:12, The Amplified Bible; The New Testament, a William Barclay yɛe) Nea ɛka nkaesɛm yi ho ne nkɔmhyɛ pii a ɛka Yehowa da no ho asɛm ne nhyira pii a wɔn a ‘wɔhwɛ Yehowa kwan’ benya no.—Sefania 3:8.
20. Afotu bɛn na ɛsɛ sɛ yetie?
20 Ɛnnɛ ankasa ne bere a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa tie afotu a wɔnam odiyifo Sefania so de mae yi: “Mommma ahyɛde no mmma ansa, da no resen aba sɛ ntɛtɛwa, mommma [Yehowa, NW] abufuw mu gya no mmma mo so ansa, mommma [Yehowa, NW] abufuw da no mmma mo so ansa. Monhwehwɛ [Yehowa, NW], asase sofo a mobrɛ mo ho ase na moyɛ n’atemmude nyinaa! Monhwehwɛ trenee, monhwehwɛ ahobrɛase; ebia wɔbɛkora mo so, [Yehowa, NW] abufuw da no.”—Sefania 2:2, 3.
21. Dɛn na Onyankopɔn nkurɔfo de besi wɔn ani so wɔ afe 2007 mu?
21 Ɛnde, hwɛ sɛnea asɛm a wɔapaw ama afe 2007 no fata: ‘Yehowa da kɛse no abɛn.’ Onyankopɔn nkurɔfo gye di sɛ “abɛn na ɛreba ntɛm sɛ.” (Sefania 1:14) “Ɛrenka akyiri.” (Habakuk 2:3) Enti bere a yɛretwɛn saa da no, momma yɛmma yɛn ani nna hɔ yiye wɔ bere a yɛte mu yi mu, bere a yehu sɛ nkɔmhyɛ ahorow yi mmamu abɛn pɛɛ no!
• Dɛn ne ‘Yehowa da kɛse no’?
• Dɛn nti na nnipa pii bu wɔn ani gu sɛnea nneɛma gye ntɛmpɛ no so?
• Dɛn nti na na ehia sɛ afeha a edi kan mu Kristofo no yɛ wɔn ade ntɛm so?
• Yɛbɛyɛ dɛn ama yɛn ani ada hɔ yiye?
Afe 2007 afe asɛm ne: ‘Yehowa da kɛse no abɛn.’—Sefania 1:14.
Sɛ Yehowa keka ne ho a, asɛm bɛfa fɛwdifo ase sɛnea ɛyɛe wɔ Noa nna no mu no
Bere a Kristofo no hui sɛ “asraafo dɔm atwa Yerusalem ho ahyia” no, na ɛnsɛ sɛ wɔtwentwɛn wɔn nan ase
Share Share ‘Yehowa Da Kɛse No Abɛn’
w06 12/15 kr. 15-19
Buronya Bere mu Asomdwoe Bɛtra Hɔ Daa?
Yesu Awo—Sɛnea Ɛde Asomdwoe Ba
Wɔreka Asɛmpa no wɔ Haiti a Ɛhɔ Yɛ Fɛ No
Ebla—Tete Kurow Bi A Wɔasan Ahu
Yehowa De ‘Honhom Kronkron Ma Wɔn A Wobisa No’
Yehowa ‘Bebu Atɛntrenee’
Afe 2006 Ɔwɛn-Aban Mu Nsɛm A Wɔahyehyɛ
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 15, 2006
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 15, 2006
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 15, 2006